crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Booltuur – Mid kamida Qisooyinkii iigu dhiirri-gelinta badnaa Taariikhdeyda! | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Faallooyinka May 17, 2017	0 265 Views
Bangaladesh (Himilonews) – Mararka qaar inagoo ku dhaw inaan kaba aamin baxno dadyowga aduunka ku nool ayaynu hadana kadis ula kulanaa shakhsiyaad nolashooda, taariikhdooda iyo jiritaankoodaba ay inagu abuurayaan rajjo, dhiirigalin, dadnimo wanaag iyo dareen naxariis leh oo aan uqaadno ibnu aadamka kale. waxa ka midaa dadkaa bilyeneerka sucuudiyaanka ah ee Sulaiman Al rajxi?
Suleiman Al rajxi waxa uu giraanta nolosha kasoo bilaabay sifir.
waxaana uu maanta dadka dunida ku nool oo dhan udhigay Duruus dhinacyo badan taabanaysa oo wax badan ka badalaya nolashooda.
#Sulaiman waxa uu kujira liiska 36ka qof ee ugu taajirsan caalamka carabta, sida ay qortay jariirada aad sawirkeeda halkan ka arkeysaan ee Forbes.
#Suleyman sidoo kale, sida aan kasoo xigtey website ka “Business insider”.
waxa uu ku jirra liiska 20 qof ee ugu deeqsisan aduunka. Suleiman waxa uu kaalinta 2 aad ka galay heerka deeqsinimada aduunka ee lagu cabiro (generosity index) waana marka hantida uu qofku ku deeqayo iyo hantida u hadhay la isku eegayo.
Sulaiman Al Rajxi waxa uu ku deeqay (Charaity) $5.6 Billion kamida hantidiisi uu lahaa waxaana usoo hadhay $590 million
waxa yidhaahdaan waxa uu ku deeqay 966% hantidiisi.
waxa uu hoos ugu soo dhacay millioneer waxaanu ahaa billioneer!
waxaaney ka mid tahay dhacdooyinka naadirka ah ee aduunka ka dhaca!
Su aasha aad is weydiineysaa waxa ay tahay hadaba siduu ku helay Sulaiman marka hore lacagtan? muxuu se ku bixiyay?
Taariikhda Sulaiman Al Rajxi
Sheekh Sulaiman Al Rajxi waxa uu ku dhashay magaalada Bukeyriya ee Gobolka Qasiim ee Dalka Sacuudi arabia 1920 kii Milaadiga. Sulaiman waxa uu ku bilabaay shaqadiisi uhoreysay xamaalnimo, isagoo waqtigaa ahaa 9 jir oo kaliya, waxaanu alaabta sida shandadaha ukala qaadi jiray dukaamada ku yaala suuqa Al Khadra ee magaalada Riyaad.
12 jirkiisi waxa uu bilaabay inuu ka shaqeeyo timirta oo uu soo gurro, waxaana uu bisha dhan qaadan jiray 6 Riyaal oo kaliya.
waxa uu ku iska seexan jiray beerta uu ka shaqeynayo, meel ciida ah, waxaanu xidhnaan jiray hal nooc oo dhar muddo dheer. saacadaha shaqadiisa oo dheera iyo hawsha shaqada oo badneyd awgeed.
Suleyman waxa ii iskaga tagay timirtii waxaanu bilaabay inuu ka shaqeeyo hudheel, muddo kadib isagoo ka noqday (Cook) cunto kariye hudheelkaa.
Mar afaraad Suleyman waxa uu shaqo ka helay kaalin shidaal oo uu ka iibin jiray shiidaalka, halkaa kumuu sikene waxa uu hadana noqday Mudalab mid kamida huteelada waaweyn ee Riyaad.
waana isla waqtigan marka uu go’aanka ku gaadhay inuu furro ganacsigiisa ugaarka ah. waxaanu furtay dukaan lagu iibiyo khudaarta (Grocery shop) waxaanu isaga tagayaa shaqadiisi.
Waxa la yaabka leh ayaa ah, inuu suleyman iibiyo Dukaankiisi gabi ahaantiisaba sababtoo ah Suleyman wuu guursadey, maadama lacagta guurka ku baxdaa wadankaa ay tahay mid qaaliya dhamaan hantidiisi waxa uu kubixiyay guurkiisa.
Suleyman waxa uu ganacsi la bilaabay walaalkiisa ka weyn Saalix Alrajxi. waa maxay ganacsigaasi tolow? awr ayay dadka ukala socda maka iyo madiina alaabta ugu kala qaadi jireen waxaana ay ka qaadan jireen waxooga lacag yar ah (service money)
1970 kii ayuu Suleyman furtay shirkad uu si gaara u leeyahay oo sarifka ah. shirkadiisa ganacsia ayaa ubalaadhtay si xawliya waxaanu muddo yar kadib wax kabadan 30 magaalo kulahaa xarumo ganacsi. Suleyman iyo walaalkii oo isna dhinac kale ganacsi uu leeyahay kawaday ayaa 1983 dii ku guuleystay in loo ogolaado inay furaan Banki islaamiya. Bangigaas oo loo bixiyay Magaca Al Rajhi Bank. Bankiga Alrajxi ayaa guuulo waaweyn kasoo hooyay gudaha Sacuudi arabia iyo wadamo badan oo aduunka ku yaalba.
Suleyman waxa uu kuubiray 36 ka qof ee aduunkan ugu taajirsan sida ay ku tilamaamtey Forbes.
Waxa yaabka ah ayaa ah inuu Suleiman Sadaqo ahaan ugu bixiyay $5.7 Billion lacag ah. lacagtaas oo ugu deeqay goobaha waxbarashada, gargaarka dadka masaakiinta ah iyo dhisida maasjida.
sanadkii hore ee 2016ka ayuu Suleyman sheegay inuu la yaabay in dhamaan lacagtii uu baxshay allaah dartii uu Allaah SWT dib ugu soo celiyay laba sanno gudahood.
Qisada Suleyman oo laga arkayo deeqsinimadiisa sidii uu markii uu dhisay qoyskiisa ugu bixiyay hantidiisa oo dhan iyo sidoo kale hantida uu sadaqo ahaanba ubixiyay waxa uu model unoqday dadka hanka sare leh (role model).
W/Q Dr Abdulkareem Ali Boltuur.
Kala xiriir: hornafrica408@gmail.com.
Previous: Kailash Satyarthi – Ninka hoggaamiyay dhaq-dhaqaaqa ka dhanka ah Addoonsiga Carruurta.
Calanka Falastin oo la suray xarunta MA ee Adis Ababa
Youtuber British ah oo qaatay diinta Islaamka.